That's so good, right?: June 2008
ဂျူလိုင် ၃ရက်နေ့က သူငယ်ချင်းတွေအိမ်မှာ ပါတီရှိလို့သွားခဲ့တာ ည၈နာရီဝန်းကျင်လည်း ကျရော အားလုံးအိမ်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ပြန်မယ်ဆိုပြီးဟုတ်တိပတ်တိနဲ့ထွက်လာတော့ အိမ်ကဘယ်သူမှ လာမကြိုကျဘူး။ ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့လည်းတစ်ယောက်မှမရှိ။ စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ ပန်းခြံကိုဖြတ်လျှောက်ပြီး ပြန်ခဲ့တော့ ထွက်ပေါက်နားမှာ ရဲကားတစ်စီးရပ်ထားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒီရဲအရာရှိကားနဲ့ ကားကြုံလိုက် ပြီးမြို့ထဲပြန်နိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့။
ကားနားကို လျှောက်သွားလိုက်တော့ အဲဒီရဲအရာရှိက “ဘာဖြစ်လို့လည်း၊ဘာကူညီပေး ရမလည်း ပြောပါ”တဲ့။ “ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး”လို့ပြန်ပြောရတာပေါ့။(သူဟာ တော်တော့် ဟော့တ်တာပဲ။ အသက်၂၀ကျော်လောက်ပဲရှိဦးမယ် ဒီထက်ကြီးမယ်ဆိုရင် ၃၀ ထက်ပိုမယ်မထင်ဘူး။ ကောင်းကောင်းဂိုက်ထွားလို့ရတဲ့ အရပ်ရှည်ရှည်၊ သန်မာတဲ့လက်မောင်း ကြီးတွေနဲ့ အတူနက်မှောင်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံ..သူ့ကြည့်ရတာ ရုပ်ရှင်မင်းသားလိုပဲ ..ကိုယ့်ဘာသာ တွေးမိတာပြောပါတယ်။) I’m sorry, အဲဒါတကယ်ပြောတာပါ။ သူ့လိုကြည့်ကောင်း တဲ့သူမျိုးကိုမတွေ့ဖူးပါဘူး။ ၀တ်ထားတဲ့ယူနီဖောင်းများချပ်ရပ်လို့။
သူ့အသွင်အပြင် ၊ရင်အုပ်ဖောင်းဖောင်း၊ဘော်ဒီတောင့်တောင့်တွေကို ကြည့်ပြီး ပေါင်ကြားထဲက ညီဘွားက ထောင်ထလာမိတယ်။ အသက်ကိုမှန်အောင်ရှုပြီးတော့ “Officer, အစကအိမ်ကို ကားတစ်စီးနဲ့ပြန်မလို့ပါ။ အိမ်ကလည်းတစ်ယောက်မှ လာမကြိုကြဘူး။ သူတို့ကိုကွန်တက် လုပ်တော့လည်း ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပတဲ့။ အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်မြို့ထဲ ကားကြုံလိုက် ခဲ့ချင်လို့ပါ။” သူက “ကိစ္စမရှိပါဘူး” ပြန်ပြောမှပဲ ရင်ထဲမှာတစ်နေတဲ့အလုံးကြီး ကျသွားတော့ တယ် စိတ်သက်သာရာရသွားတယ် ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော် ကာားထဲဝင်ပြီး ခါးပတ်ပတ်ပြီးချိန်မှာ သူကားမောင်းထွက်ပုံများ ကျားရိုင်းတစ်ကောင်လို စွမ်းအားအပြည့်။ ဘေးကလိုက်စီးရတာများ လူကိုအကျေနပ်ကြီးကျေနပ်စေတာပါ။
သူက “မင်းမှာ girlfriend ရှိလား”ကျွန်တော့်ကိုမေးတော့ No (သူ့လက်ချောင်းတွေကို ရှိုးလိုက်တော့ လက်စွပ်ဝတ်မထားဘူး။ ဒါဆိုSingle ပဲပေါ့။ ပြီးတော့Straight ပဲထင်ပါရဲ့။) သူ့ကိုလည်း ကောင်မလေးရှိလားပြန်မေးတောအကြည့်စူးစူးနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီး “နိုး”ဆိုပဲ။
သူ့ပါးစပ် က သူဟာBisexualလို့ပြောလာတော့ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူးကြားရတာ။ဒါကို သူ့မိဘ တွေလည်းမသိဘူးတဲ့။ စကားတပြောပြောနဲ့ စီးလာရင်းသူ့ကို ကြည့်လိုက် သူ့ဘော်ဒီ ကိုကြည့်လိုက်နဲ့ ဘောင်းဘီထဲက လီးက မာတောင်လာရော။ပိုဆိုးတာက နိုင်လွန်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ Nike Basketball ဘောင်းဘီကိုဝတ်ထားတာဆိုတော့ အဝေးကမြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ရောပဲ။
အဲဒါကိုသူမြင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားကို သေချာစိုက်ကြည့် လိုက်လို့ပါပဲ။
ကားကို U-turn ကွေ့လိုက်တာ.. ..”ဘယ်ကိုသွားမှာလည်း၊ ဘာလုပ်မလို့လဲဗျု”ဆိုတော့” မင်းမကြာခင်သိရမှာပေါ့၊ ငြိမ်ငြိမ်လေးလိုက်ခဲ့ပါ”တဲ့။ ဘာတွေဖြစ်နေသလည်းဆိုတာ မယုံနိုင်သလိုပဲ။ ဒီငနဲနဲ့ လိုးရရင်ကောင်းမှာ ပဲလို့တွေးနေမိခဲ့တာလေ။ ဆွဲဆောင်အား ကောင်းလွန်းတဲ့သူ့ပုံစံကြောင့် အိမ်ရောက်အောင်တောင် မစောင့်နိုင်ဘူး ဗျာ..သူ့နားကပ်ပြီးနမ်းမိတယ်၊ နားပေါက်လေးတွေကိုလျှာနဲ့ လျှက် ကလိတယ်၊ပြီးတော့ သူ့လည်တိုင်၊နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို တရှိုက်မက်မက်နမ်းမိတယ် သူကားမောင်းနေတုန်း..။ သူကလည်း ဘယ်လက်နဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို ပွတ်သပ်ပေးလေရဲ့။
သူ့အိမ်ရောက်တော့ အခန်းကျယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ သူ့အိပ်ခန်းထဲကိုဝင် သူလော့ခ်ချပြီး ပိတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ခုတင်ပေါ်တွန်းလှဲတယ်၊ပြီးတော့ အ၀တ်တွေကို ဆွဲချွတ်တယ် အောက်ခံဘောင်းဘီပါမကျန်ပေါ့ဗျာ။နူးညံ့နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို သူနမ်းတယ်၊ လည်တိုင်တစ်လျှောက် ခပ်ရွရွပွတ်သပ်ပေးရင်း လီးကိုမာသထက်မာအောင်ဆွပေးလေရဲ့။
အိုး.....လီးထိပ်က အရေပြားကို ပီကေ၀ါးသလိုတရွရွကိုက်နေတယ်၊ပြီးတော့ ကွမ်းသီးခေါင်းကိုငုံပြီးလျှာနဲ့ ကစား....တရွေ့ရွေ့နဲ့အဆုံးထိငုံလိုက်တာ...အား..ဖီးလ်ပဲ..။ အင်း..ကျွန်တော်နှင့်တွဲခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်လီးက သူတို့ထက်ကြီးတယ် လေ။ ဒီရဲအရာရှိရဲ့ လီးကဘယ်လောက်ရှိမလဲ. .အား..ရေငတ်လာသလိုပဲ..အာခေါင်ခြောက် လာပြီ.....ရှီး။ ကျွန်တော့်လီးက ၈လက်မခွဲလောက်ရှိတယ်။ သူတော်တော် အစုပ်ကောင်းတာပဲ. ..အား...အ။ဒီလိုဘဲမျိုးရဲ့ အစုပ်ခံရတာ ဘယ်လောက်ကျေနပ်စေသလဲမသိတော့ ဖီးလ်အရမ်း တက်ပြီး အသံထွက်အောင်ညည်းညူမိတဲ့အထိ။
ပြီးတော့မလိုအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်မိတာ မကြာခဏ။ ငါးမိနစ်လောက်ဆက်စုပ်ပေးနေသေး တော့ သူ့အညိုရောင်ဆံနွယ်ခွေလေးတွေကို လက်နဲ့ခပ်ဖွဖွပွတ်သပ်ပေးပြီး ခဏရပ်ပါဦးလို့ ပြောလိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်လည်း လီးစုပ်ချင်လို့ ခုတင်ပေါ်ထိုင်ပါဦးပြောပြီး တင်းရင်းနေတဲ့ သူ့ယူနီဖောင်းကိုချွတ်တယ်၊ ကြယ်သီးလေးတွေတစ်လုံးချင်း ဖုတ်လိုက်တော့ ကြွက်သား အမြှောင်းမြှောင်းနဲ့ ရင်ဖိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ရင်အုပ်ကြီးမြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့။ ရင်အုပ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ အမွှေးနုနုလေးတွေကို လက်နဲ့ခပ်ဖွဖွရွရွလေးပွတ်သပ်မိသလို ဘယ်လီသားလေး တွေကို တရှိုက်မက်မက်နမ်းမိတယ်။ သူ့အသက်ရှူသံပိုမြန်လာတာကိုကြားရတယ်။သူက “မိန်းမတွေကိုပိုကြိုက်သလိုပဲ၊ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံသိပ်မရှိဘူး”ဆိုပဲ။
“ You , I နဲ့ အတူအိပ်ပြီးသွားရင်တော့ ယောက်ျားလေးတွေကို ပိုကြိုက် လာမှာပါ”လို့ပြောလိုက်တော့ သူကပြုံးသေးတော့တယ်။ သူ့မှာကျန်သေးတဲ့ အ၀တ်လေး တွေချွတ်ဖို့ကြိုးစားရတာပေါ့။ သူ့ခါးပါတ်ခေါင်း လေးကို တဖြည်းဖြည်း ဖြုတ်ရင်းဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ဖောင်းကားနေတဲ့ သူ့အောက်ခံဘောင်းဘီ က ကျွန်တော့်မျက်စိနား ထင်းကနဲ။ ဘာကြောင့်ဆို သူ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ပြီးချွတ်ပေးနေမိတာကိုး။
ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ခပ်ဖွဖွကိုင်ကြည့်မိတော့ ရင်ထဲမှာဗြောင်းဆန်သွားအောင် အထိအတွေ့ရဲ့ထူးခြားမှုကို ခံစားလိုက်ရတယ်။(သူဝတ်ထားတာက Dark Navy blue ရောင် Boxer မဘောင်းဘီတိုပဲ။ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ တောင်ကြည့်ကောင်းလိုက်တာ။)သူ့ဘောင်းဘီကို နမ်းရှုံ့မိသလို ဒစ်ကိုလည်းနှာခေါင်းနဲ့ တို့ထိကစားမိတယ်။ အနံ့အသက်ပြင်းပြင်းမရှိ ရင်ဖိုဖွယ်အနံ့ကိုယ်သင်းနံ့ကိုသာရပါတယ်။ ရှူးဖိနပ်တွေခြေအိတ်တွေကို ဆက်ချွတ်မိတော့ လည်း ဖြူဖွေးတုတ်ခိုင်ပြီးအနံ့အသက်ကင်းရဲ့။ခြေချောင်းလေးတွေ ခြေချောင်းလေးတွေက တစ်ဆင့် တဖြည်းဖြည်းပွတ်သပ်လိုက်၊ သူ့လီးကို မထိတထိလုပ်လိုက် မျိုးစုံကစားလိုက်တာ သူလည်းနတ်ပြည်ရောက်နေသလားမသိ မျက်စိမှိတ်ပြီးညည်းညူလိုက်တာ သူ့အိမ်မို့ တော်ပါသေးရဲ့လေ။
အမွှေးနုလေးတွေပေါက်နေတဲ့ ဆီးစပ်ရဲ့အပေါ်နားက ချက်ပေါက်လေးကို လျှာနဲ့ထိုးမွှေလိုက်တော့ တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားပုံက သဘောကျစရာပင်ကောင်းသေးတော့တယ်။ boxer ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ကွမ်းသီးခေါင်းကလေးကို ဖွဖွကိုက် လဥလေး ကိုငုံကစား လိုက်တော့....သူ့ခမျာ...”ရှီး....အား...အ”ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုလှမ်းကိုင်ပြီး ဆက်မလုပ်ထဖို့တားတယ်။ သိတယ်လေ.....ရုတ်တရက်ပြီးချင်သလိုဖြစ်သွားပြီဆိုတာ။ သူ့ဘောင်းဘီကို သွးနဲ့ကိုက်ပြီးဖြည်းဖြည်း ဆွဲပြီးချွတ်လိုက်တော့ မြင်လိုက်ရတာက မြင်ဖူးသမျှထဲမှာ အကြီးဆုံးပါပဲ။ “HOLY SHIT! This monster was ၁၀ လက်မလောက် ရှည်ပြီး တုတ်လည်းတုတ်သေးတယ်။ ဘာကြောင့်အလွယ်တကူ ပြောနိုင်ရသလဲဆိုရင် အနည်းဆုံး၂လက်မလောက် ကျွန်တော့်လီးထက်ပိုရှည်နေတဲ့ပုံမို့ပါ။(ကိုယ့်ဘာသာ မကြာခဏ တိုင်းကြည့်လေ့ရှိတာကြောင့်လေ။)
သူ့ကိုပြုံးဖြဲဖြဲကြည့်ပြီး “တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူးဗျာ ဒီလောက်ထွားတဲ့လီးကို၊ မကြုံဖူးတဲ့အရသာ ခံစားရတော့ မလားမသိဘူး။” လီးထိပ်က အပေါက်လေးကို လျှာနဲ့ထိုးလိုက် ဒစ်ထိပ်နဲ့အရေပြား ကြားကို ကလိလိုက်၊ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို ငုံစုပ်လိုက်၊ထိပ်ကို ငုံထားရင်းကနေ အဆုံးထိ စုပ်ချလိုက်တယ်.....လည်ချောင်းထဲရောက်ရောပဲ။
“ ငါ....ငါ....ပြီးချင်ပြီ.....ပြီးတော့မယ်” သူ့လီးတစ်ချောင်းလုံးပါးစပ်ထဲမှာပြည့်နေတာပဲ။ သူ့လီးကိုသူ့ဖာသာ ခဏကိုင်ထားခိုင်းပြီး လဥလေးတွေကို ငုံလိုက်တာ သူ့မှာ moaning so loud ။ လဥတွေကို ငုံစုပ်လိုက်ဖွဖွလေးကိုက်လိုက် ဆက်တိုက်လုပ်ပေးတဲ့အပြင် လီး တစ်ချောင်းလုံး ကို အရင်းမှထိပ်ထိ လျှက်လိုက် တဖွဖွစုပ်လိုက်တော့တာ။
သူ့ကိုကောင်းကောင်းလေး blow job လုပ်ပေးမိတယ်။ သူ့လီးကို သဘောကျတာရော၊ သူ့ရဲ့ဘော်ဒီ ပြီးတော့ So handsome လေ။ ထွားတာကလည်းပါးစပ်တောင် ပြည့်လုမခန်း။ သူ့လဥကို စုပ်နေတာကိုရပ်ပြီး လီးတစ်ချောင်းလုံးကိုပါးစပ်ထဲထည့်ပြီးခေါင်းကို ရှေ့တိုး နှောက်ငှင်လုပ်ပေးမိတယ်။ သူကလည်းခေါင်းကိုကိုင်ပြီး ပါးစပ်ကိုဖင်လိုးသလို ညှောင့်လိုက်တာ အသက်ရှူမှားရောပဲ။ Sucking လုပ်ပေးတာကို ကျေနပ်စွာသူခံယူသလို ကြိုက်လည်းကြိုက် သွားပုံပါပဲ။ သူ့အသက်ရှူသံပိုပြင်းလာသလို “AH……AH …..AH OOOOOOOOHH YES… ..AHH…..OH MAN…OH MAN…..THAT WAS INCREDIBLE. NO WOMAN IN THE WORLD COULD DO AS GOOD A JOB AS YOU BRURCE!”။
ငါ့ကောင်ရေအဲဒါဖီးလ်ပဲ။ “Bruce, မင်းဖင်ကိုလိုးချင်တယ်ကွာ...”တဲ့ အသံ....လှိုက်မော နေတဲ့အသံနဲ့။ပထမတော့ တော်တော်ကြောက်မိတယ်။ “အင်း”လို့ပြောမိပေမယ့် စိတ်ထဲ မှာတော့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေးလုပ်ရင် ကောင်းမှာပေါ့။ သူကတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာကို ပြောပြီးပြီ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကလည်း “I wanted to ride him to kingdom cum”လို့။ အပေါ်ကနေ ခပ်ဖြည်းဖြည်းထိုင်ကြည့်မယ်ပြောတော့ “ကောင်းတယ်...ခုန်ပြီးတော့ ကိုဆောင့်”တဲ့..ကြောက်စရာ ပါလား။ထွားကြိုင်းလှတဲ့ သူ့လီးပေါ်ခပ်ဖြည်းဖြည်းလေးထိုင် ချလိုက်တယ်။ချောဆီမပါတော့ နဲနဲတော့နာတာ ပေါ့ဗျာ။ “အာ....အ...အ” ခပ်ဖြည်းဖြည်းလေး....ထိုင်ပြီးနှဲ့သွင်းလိုက်တာ ကွဲထွက်သွားသလားအောက်မေ့ရတယ်။ ပြီးတော့ ရှေ့ထိုးနှောက်ငှင်လုပ်ရင်း ခါးကစားလိုက်တာ ငါးမိနစ်လောက်ကြာမှာ တစ်ဝက် လောက်ဝင်သွားတယ်။
သူက ဖက်တယ်၊နမ်းတယ် ပြီးတော့ “မင်းကိုချစ်တယ်ကွာ မင်းဖင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးက အရမ်း Good! ဆောင့်ပေးကွာအပေါ်ကနေ....အား...အ... Please” ။ခြေထောက်တွေ၊ပေါင်တွေ အားပြုပြီး အပေါ်ကနေ ကျွန်တော် ဆောင့်တော့ သူကခါးကိုလက်နဲ့လှမ်းထိန်းပြီး အောက်က နေ ဖြည်းဖြည်းဆောင့်ပြီး ချောမွေ့အောင်ကူညီ လေရဲ့။ ခပ်ကျယ်ကျယ်မဟုတ်တောင် အသံ ထွက်ညည်းမိပြီပေါ့..OH AH YES! OH STEVE!! YES IT FEELS SO GOOD SOOOOO …GOOD!
ကိုယ်တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားသလိုပဲ မိန်းမောသွားတာ မကြာခဏ။ ပြည့်ပြည့် အင့်အင့်ကိုရတဲ့ အရသာကြီးပါပဲဗျာ။ စတိဗ်ရဲ့ အော်သံပိုထွက်လာသလို “ချစ်တယ်” တဲ့ ကျွန်တော့်ကို။ သူ့ဒစ်ကိုထုတ်ပြီး ကျွန်တော့်အပေါက်လေးကိုနမ်းတယ်။ ပြီးတော နောက်ကနေလိုးချင်တယ်ဆိုပြီး Doggy style နေခိုင်းကာ အဆုံးထိ ဇကောဝိုင်းမွှေပြီးနှဲ့သွင်း လိုက်တာ..အား..ပါးပါး..။
အဲဒီဖီးလ်က ပိုကောင်းသလိုပဲ။ အရင်တုန်းကတော့ ဒီလိုအနေအထားမျိုးနဲ့မလိုးဖူးပါ။ သူကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်တတ်သူပဲ...ဟာ ဟ။ နောက်ကနေဆောင့်တိုင်း သူ့ဘောလ်က တင်ပါးတွေကို လာလာရိုက်သလို...အား..အ အဆုံးထိထည့်လိုက်မွှေလိုက်ဆောင့်လိုက်နဲ့ ခပ်မြန်မြန် ဆောင့်ချက်တွေ OH HOW, HUH! IT FELT SO FUCKING GOOD!! WOW OH MY OOOOHHH ….. ဖီးလ်အရမ်း ကောင်းအောင် လိုးတတ်သူပါပဲ။
သူ့ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေ မြန်ဆန်လာသလို အသက်ရှူသံတွေကလည်း...” ငါပြီးတော့ မယ်...အာ့ အား”ဆောင့်ချက်တွေ အမြန်နှုန်းမြင့်သွာြး့ပီး ဖင်ထဲမှာနွေးကနဲ နွေးကနဲ ခံစားလိုက် ရပါပြီ။ ကျစ်နေအောင်ဖက်မိကြတယ်၊ အနမ်းမိုးတွေရွာကြတယ်၊ ပြီးတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန် စုပ်ကြမှုတ်ကြလုပ်လိုက်ကြတာ အဲဒီညက ကျွန်တော်က နှစ်ကြိမ်၊ စတိဗ်က သုံးကြိမ်ထက်ကမယ်မထင်ဘူး...ယုံတောင် မယုံနိုင်စရာကောင်းတာက သူဟာBi ဖြစ်နေတာရယ်။ ကျွန်တော့်ကိုနမ်းခဲ့တယ်၊ြ့ပီးတော့ ချစ်တယ်တဲ့ လာတွေ့ခွင့်ရှိရင်မကြာ ခဏလာတွေ့မယ်၊သူ့အိမ်လာချင်ရင် သူ့ကိုလိုအပ်ရင် ညတိုင်းလာနိုင်ပါတယ်ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်က You Can Count On it! ။
Posted by Alex Aung at 9:52 PM No comments:
အဲဒီနေ့က ကောလိပ်ကိုရောက်တာ ပထမဆုံးနေ့ဆိုတော့ Todd တော်တော်လေး စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဖြစ်မိတယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ အိမ်ကိုမခွဲခွာစဖူးဘူး တစ်ပတ်လောက်တောင်အိမ်ကမခွဲဖူးဘူး။အခုတော့ ကျောင်းတက်ဖို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ Area တစ်ဝက်ကျော်လောက်ထိလာခဲ့ရတာကိုး။ ကျောင်းဝင်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲနေတာတွေ၊ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေကို တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းလိုက်ပြီး အိပ်ဆောင်ရှိရာကိုခရီးဆောင်အိပ်တွေ ၊ အထုပ်အပိုးတစ်ချို့ကိုဆွဲပြီးလှမ်းလာမိတယ်။ ဘယ်လိုမိတ်ဆွေသစ် သူငယ်ချင်းသစ်တွေရမလည်း ဆိုတဲ့အတွေးကို တွေးရင်း"Edmund Hall" လို့ခေါ်တဲ့အဆောက်အဦးကြီးပေါ်ကိုတက်လာခဲ့တယ်။ဒါဟာ သူနေရမဲ့အိပ်ဆောင်ဖြစ်တာကြောင့် ပေါ့။ရင်ထဲမှာ တင်းကျပ်သလိုခံစားရတာမို့ ပြူတင်းပေါက်နားရပ်ပြီး အသက်ခပ်ပြင်းပြင်းရှုထုတ်လိုက်မိရတယ်။ သူ့ အခန်းရှိရာကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရသလို အထုပ်အပိုးများချလျှက်ထိုင်နေသော သူ့အခန်းဖော်ကိုတွေ့ လိုက်ရပါတယ်။ သူတော် တော်ကြည့်ကောင်းကြောင်းTodd သတိတားလိုက်မိတယ်။ သူ့အခန်းဖော်ဟာ တော်တော့ကိုကြည့်ကောင်းသူဆိုတာ။
ကြံ့ခိုင်တဲ့ကိုယ်နေဟ န် ၊ကောက်ကွေ့တဲ့ဆံသားအချို့တောက်ပတဲ့အစိမ်းရောင်မျက် ၀န်းတစ်စုံနဲ့ပေါ့။ Toddရဲ့ညီဘွားကဘောင်းဘီအပြင်ဘက်ထွက်ချင်ဟ န်နဲ့ ရုတ်တရက်တွန်းကန်နေရဲ့။ " ဟိုင်း...ကိုယ့်နာမည်က Toddပါ" သူ့ကိုရင်းနှီးအောင် စမိတ်ဆက်လိုက်မိပါတယ်။ သူကလည်း" ဟေး...ကျွန်တော့်နာမည်ကStanပါ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။" ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့အသံနဲ့ပြန်နှုတ်ဆက်လေရဲ့။
Todd တစ်ယောက်မယုံနိုင်စရာ နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့ကို လက်ဖ ၀ါးမှတစ်ဆင့်စတင်ခံစားလိုက်ရပါတယ် Stan လက်ကိုဆွဲကိုင်နှုတ်ဆက်လိုက်ချိန်မှာပေါ့။နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့က လိင်စိတ်ကိုနိုးထစေတာအမှန်ပါပဲ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် Toddလီး တောင်လာမိတာအမှန်မို့။ သူသတိထားမိလိုက်တယ် သူလီးတောင်တာကိုStanမြင် သွားပြီဆိုတာပါပဲ။ Todd ရှက် ရွံ့စွာနဲ့ ရေချိုးခန်းကို လှမ်းထွက် လိုက်စဉ်မှာ နူးနူးညံ့ညံ့ဆွဲကိုင်ပြီး ပြန်လှည့်ခိုင်းတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ Stan သူ့ကိုကြည့်ပြီးနူးညံ့နွေးထွေးစွာပြုံးပြတယ်။Todd မယုံနိုင်ဘူးပေါ့ သူ့မျက်လုံးကိုသူ...ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့Stanတစ်ယောက်လည်းလီးတောင်နေတာမို့။
Stanလေ Toddရဲ့ တောင်နေတဲ့လီးကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေခပ်ဖွဖွဖိညှစ်ပြီးကိုင်လိုက်တယ်။ Toddမျက်လုံးရုတ်တရက်ဖွင့်လိုက်မိတော့ ဘာတွေဖြစ်နေလည်း အံသြမိ ဘာတွေဖြစ်နေသလည်းဆိုတာကိုပေါ့။ Stanတစ်ယောက် Toddရဲ့ရှပ်အင်္ကျီကိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲချွတ်နေတယ်..... ဘယ်ရီကြွက်သားလေးတွေကိုတဖွဖွနမ်းတယ်၊နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ငုံလိုက်လျှာနဲ့ကစားလိုက်လုပ်တယ်၊တဖြည်းဖြည်း အပေါ်တက်လာပြီး Adam 's apple ကိုငုံခဲလိုက်သေးတယ်။Foreplay တော်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူပါပဲ။ Todd တစ်ယောက် သူ့အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို Stan ကခပ်ဖွဖွကိုက်တာကို အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိသလို Stanအနေနဲ့လည်းT odd ကမိမိရဲ့လျှာကို ပြန်လည်စုပ်ယူလိုက်တဲ့ခံစားမှုကို အသဲခိုက်ဆုံးပါ။
အချိန်နည်းနည်းကြာအောင်ကို မစောင့်နိုင်ကြပါဘူးအ၀တ်တွေ အားလုံးနီးပါးချွှတ်မိကြသလို အနမ်းတွေလည်းဖလှယ်ပြီး ကြပါပြီ။Todd....Stan ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ ရင်ဘတ်တစ်လျှောက်နမ်းတယ်၊တဖြည်းဖြည်းဆိုပေမယ့် အလျှင် စလိုဆိုသလိုဘယ်လီကြွက်သားလေးတွေကိုလျှာနဲ့ကစားတယ်၊ ပြီးတော့.....ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။လှလိုက်တဲ့ လီးပဲ..။ ရှစ်လက်မလောက်ရှိမယ်....ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားပြီးအညိုရောင်အမွှေးတစ်ချို့ကဆီးခုံပေါ်မှခပ်စုစု။ လီးကထောင်နေရုံသာမက Pre-cum တစ်ချို့ ကျနေတယ်။ Todd နူးညံ့တဲ့ အသားချောင်းတစ်လျှောက်လျှာနဲ့ လျှက်မိသလို Stan ရဲ့ Pre-cum အားလုံးမျိုချပစ်တော့မလိုနဲ့ ပါးစပ်ထဲကိုစုပ်ယူလိုက်တယ်။နှုတ်ခမ်းများမှတစ်ဆင့် Stanရဲ့ကွမ်းသီးခေါင်းကို ငုံတယ်၊အဲဒီခံစားမှုကိုStan ကြိုက်တယ် ..ပူနွေးတဲ့ပါးစပ်ဟာ သူ့လီးကိုပိုမိုမာထောင်စေသလို ခြေဖျားတွေတဆတ်ဆတ်တုန်လောက်အောင် ဖြစ်လာလို့ အိပ်ရာပေါ်လှဲချလိုက်ရတယ်ပေါ့။ Todd တစ်ယောက်သူ့ရဲ့လီးကို စုပ်ပေးနေတုန်းသူ့ဆံပင်လေးတွေကို တဖွဖွပြန်ပွတ်သပ်ပေးမိနေတယ်။ Todd ရဲ့လည်းချောင်းထဲကို လျှောကနဲဝင်သွားအောင်ထိုးလိုက်မိတော့..."အား...ပါးပါး ကောင်းလိုက်တဲ့ဖီးလ်"။သူ့ကိုယ်သူမယုံနိုင်အောင် သူ့အခန်းဖော်ရဲ့လီးကိုကောင်းကောင်းစုပ်ပေးနေမိတာပါလားလို့Todd တွေးမိတယ်။
Stan အခုအချိန်မှာ သူ့အခန်းဖော်ကို ဘယ်မှမထွက်ခွာသွားစေချင်သလိုဖြစ်နေမိတယ်။ Toddသူ့လီးကိုစုပ်ပေးပြီးမော့ကြည့်ချိန်မှာ"လိုးရအောင်"လို့ အကြံပေးမိတယ်။သူ့ခရီးဆောင်အိပ်ကို ဖွင့်ပြီးKY-Jelly ပုလင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ Todd လီးတစ်ချောင်းလုံးသူ့ဖင်ထဲကိုထည့်ချင်တယ်လေ...ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့ဘူး။ ၆လက်မလောက်ရှိတဲ့ Todd လီးကိုအပေါ်က ခပ်ဖွဖွလေးကိုင်ပြီး ချောဆီလေးတွေဆွတ်ပေးတယ်...ပြီးတော့အပေါ်ကနေ ခပ်ဖွဖွလေးထိုင်ချလိုက်တယ်.. " တော်တော်ကောင်းတဲ့ နာကျင်မှု ဖီလင်ပါပဲ"။
Todd မျက်လုံးကို မှိတ်ပြီးအရသာကိုခံစားရတာပေါ့..... သူ့ရဲ့လီးတစ်ချောင်းလုံးStanဖင်ရဲ့ဖျစ်ညှစ်မှုအရသာကိုရယူရင်းပေါ့။ Stan ရဲ့ခါးကိုခပ်ဖွဖွ လှမ်းကိုင် ရင်းအောက်ကနေ ဇကော ၀ိုင်းမွှေလိုက်တယ်....Stan ဖီးအရမ်းကောင်းသွားပုံပဲ။ ခပ်ဖွဖွလေးစောင့် ရင်း လမ်းကြောင်းဖွင့်နေတာ...".အား...ရှီး " ဟိုးအမြင့် ဆုံးကိုရောက်လိုက်.... အောက်ဆုံးကိုရောက်လိုက် Sky- diving ထိုးနေသလိုပါပဲ။
Stanလေ Todd ဖက်ကိုမျက်နှာမူထိုင်လိုက်ရင်းခပ်မြန်မြန်စောင့်မိလာသလို ပြီးချင်လာသလိုဖြစ်မိတယ်။ပိုဆိုးတာက Toddသူ့ လီးကိုကိုင်ပြီးဂွင်းတိုက်ပေးလိုက် အောက်ကနေဇကော ၀ိုင်းမွှေလိုက်လုပ်နေလို့...အရသာနှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းစားသုံးနေရတာကြောင့်.. မို့။
Todd လည်း Stan ရဲ့မာထောင်နေတဲ့လီးကိုကိုင်ထားရတဲ့ခံစားမှုကိုကြိုက်မိသလို...တစ်ချိန်တည်းမှာ ဖင်လိုးရတဲ့အရသာကို နှစ်သက်မိတာ။ Todd ပြီးတော့မယ်...မထိန်းနိုင်တော့ဘူး......ဒါကိုStan သိတော့.....ခပ်မြန်မြန်လေးစောင့်...သူ့ဖင်ထဲမှာပြီးစေချင်လို့ ခပ်မြန်မြန်လေးစောင့်ပေးတာပေါ့။ " အား...အ....အ "ခပ်မြန်မြန်သွက်သွက်လေးစောင့်ရင်း တင်းရင်းနေတဲ့ ဖင်ထဲကိုပန်းထုတ်လိုက်မိတယ်။ ရဲ့လီးကိုလည်းကိုင်ပြီး ခပ်မြန်မြန်လေးထုပေးတော့စက္ကန့် မခြားပါဘူး ကော့တက်လာတဲ့ခါးနဲ့အတူ ရင်ဘတ်၊ ဗိုက်သားတစ်လျှောက်ရွှဲနစ်သွားတယ်.... လေ။
နှစ်ဦးစလုံးပြီးသွားသလို Todd ရဲ့လီးချောင်းကြီးလည်း Stanရဲ့ ဖင်ထဲကနေ ပြွတ်ကနဲထွက်လာလေရဲ့။နှစ်ဦးသာ အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်ရင်း ကြည်ကြည်နူးနူး ပြုံးပြမိကြတယ်..။ Todd သိလိုက်ပါပြီ collage life အ ချိန်တွေရဲ့ အစကောင်းမှန်း..ပြီးတော့ သူ့ ဘ ၀ ရဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံး နှစ်များရဲ့ အစဆိုတာ။
Posted by Alex Aung at 10:31 PM No comments:
ကျွန်တော်အံ့သြခဲ့တာပေါ့ ဗျာ… သူ့ဆီကကြားခဲ့ရတဲ့ သတင်းကြောင့်ပေါ့။ အင်း…. ကျွန်တော့် gay experience ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်လာအောင် gay saunaတစ်ခုကိုသွားသင့်ကြောင်း ကျွန်တော့် ဒစ်ကိုကောင်းကောင်းစုပ်ပြီးချိန်မှာသူပြောပြခဲ့တာ သူ့အိမ်ကကန်ဘောင်ဘေးမှာပေါ့။
သူက “Ken’s”ဆိုတဲ့ sauna ကနေစတင်လှုပ်ရှားသင့်သတဲ့ ။ အဲဒီနေရာက ဆစ်ဒနီရဲ့အရှေ့ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေမှာရှိတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ saunaတွေ၊ steam roomတွေ၊ sling roomတွေ၊ movie room တွေနဲ့ private cubicleလေးတွေရှိတယ်လေ။
ဘယ်နေရာကို ဘယ်လိုသွားဘယ်နေရာမှာဆိုတာ ညွန်ပြပြီးအဲဒီနေရာကို တစ်ညနေမှာလိုက်ပို့ခဲ့တယ်။
အဲဒီနေရာကို မသွားခင် သူ့လီးကိုမွတ်သိပ်စွာစုပ်ပေးခဲ့မိတယ်… ဟီး။
၀င်ပေါက်ဆီခြေလှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရင်ခုန်သံကိုပြန်ကြားရလောက်အောင်နည်းနည်း ကြောက်မိတယ်။ ၀င်ကြေးပေးပြီးနောက် အ၀တ်လဲခန်းထဲဝင်ခဲ့တယ်…အတွေ့အကြုံသစ်ကို ရှာဖွေဖို့လှမ်းထွက်ခဲ့တယ်။ ..ရေနွေးငွေ့တွေထနေတဲ့ အခန်းထဲမှာ ခပ်ချောချောဘဲေ တွက အ၀တ်မပါဘဲရှိနေလေရဲ့။
တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်လီးကိုစုပ်ပေးသလို juicy cock တစ်ချောင်းကလည်းပါးစပ်ထဲရောက်လာခဲ့တယ်။အဲဒါတွေအားလုံးဖြစ်နေကြအတိုင်းပဲဆိုတဲ့ ဖီးလ်ကိုခံစားနေရသလိုပဲ။ ဒါကြောင့်လှုပ်ရှားခဲ့တာပေါ့… ဟီး။
အခန်းကျယ်ထဲမရောက်ခင် လူသွားလမ်းတွေထဲမှာ ၀ိုးတ၀ါးမြင်ခဲ့ရသေးတယ် တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပိတ်ထားတဲ့ အခန်းငယ်လေးတွေထဲမှာခပ်ကြမ်းကြမ်း ဗျူဟာခင်းနေကြတာကို။
အခန်းထဲရောက်တော့ အချင်းချင်းလီးစုပ်နေကြတာတွေ၊အဲဒါတွေကိုကြည့်ပြီး ဂွင်းထုနေတဲ့လူတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုမြင်ခဲ့ရတော့ ရင်တွေတဒုန်းဒုန်းခုန်သွားတာပေါ့။ မလင်းတလင်းအလင်းရောင်ထဲမှာ ထိုင်ချလိုက်တယ်။ မကြာခင်မှာပဲ တချို့ဘဲကြီးတွေက သိသိသာသာချက်ကင်လုပ်နေလေရဲ့။ လူရည်သန့်ပုံပေါက်တဲ့ ဘဲတစ်ပွေက နွေးထွေးတဲ့အပြုံးနဲ့ ပြုံးပြပြီး ထရပ်လိုက်တာ တဘက်ကလျှောကျပြီး သူ့ရဲ့တောင့်တင်းလှတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ တောင်နေတဲ့လီးကို လှစ်ပြသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့။ကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာရင်းလက်ကလည်း သူ့လီးကို ကိုင်ပြီးကစားလာနေရဲ့။ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာရပ်လိုက်တော့ သူ့လီးကပိုမာလာတဲ့ပုံနဲ့ခေါင်းငြိမ့်နေတယ်။
သူ့ဒစ်ကိုလက်နဲ့လှမ်းကိုင်လိုက်တော့ သန်မာတဲ့ ထွားကြိုင်းတဲ့ တသိမ့်သိမ့်ခံစားမှုကိုပေးမဲ့ စံချိန်မီကြီးပါပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုငုံ့ပြီးနမ်းတယ်…..ပြီးတော့နှုတ်ခမ်းတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းနမ်းတယ်။ သူ့ရဲ့သန်မာတဲ့လျှာက ပါးစပ်နှစ်ခုထိကပ်သွားချိန်ထိတရစပ်မွှေနေတာကို ခံစားရပါပြီ ဦးဆုံး..။*
“မင်းဘောင်ပေါ်တက်လိုက”် အမိန့်ပေးသလိုသူပြောတော့ လုပ်ခဲ့မိတယ် မငြင်းဆန်နိုင်ပဲလိုက်နာတယ်။ တဘက်လည်း မရှိတော့သလိုအ၀တ်မပါဗလာဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့ဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုတိုးကပ်မိသလိုကျွန်တော့်ခြေနှစ်ဖက်ကိုမတင်လိုက်ကာ နောက်ကိုနည်းနည်းမှီလိုက်တယ်။ သူ့ ရဲ့အရသာထူးပေးမဲ့ဒစ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းထိကပ်လာပြီ။ သူ့ ရဲ့သန်မာမှု၊ အနမ်းကျွမ်းကျင်မှု ကိုနှစ်သက်မိသလိုပါပဲ။လူသစ်လေးကျွန်တော် လိုးပွဲကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်နေတာကို လူတစ်ချို့ကကြည့်နေလေရဲ့။
သူချောဆီရယ် Condomရယ်ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော့်ဖင်မှာ ချောဆီနည်းနည်းဆွတ်လိုက်ပြီး သူ့ဒင်ကိုတဖြည်းဖြည်းထဲ့လိုက်တယ်။ အပေါက်ထဲကိုညင်ညင်သာသာထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ခုနကစိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေ ရောတခြားအရာတွေပါပျောက်ကုန်ပါရော။ အဆုံးအထိထည့်လိုက်တာ သူ့ လီးရဲ့မာကျောမှုရော လဥနဲ့ထိနေတာကိုရောခံစားလိုက်ရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လှုပ်ရှားတာနည်းနည်းကြာချိန်မှာ စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာလည်းစတင်ရွေ့လျားကြကုန်ရဲ့။ကြိုက်တယ်ဗျာ public မှာအလိုးခံရတာကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေးအနမ်းခံရတာကိုရောပေါ့။ အဆုံးထိသွင်းလိုက် အကုန်ထိထုတ်လိုက် တငြိမ့်ငြိမ့်လုပ်နေတာကို ဖီးလ်ယူနေချိန်မှာ အခန်းထဲကလူတွေလည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စုပ်ကြမှုတ်ကြ၊ နမ်းတဲ့သူကလည်း ပြင်းပြင်းပြပြနမ်းနေကြလေရဲ့။
မကြာခင်မှာပဲ ငနဲကြီးကtempoမြင့်တက်လာပြီး ဖီလင်အရမ်းမြင့်တဲ့အသံတွေညည်းလာပြီးနောက်သူ့ဒစ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး အပြင်မှာပန်းထုတ်လိုက်လေရဲ့။သူကလည်းကျွန်တော့်လီးကို ပြန်စုပ်ပေးပါတယ်…ပြီးတဲ့အထိပေါ့။
ဒီအတွေ့အကြုံက ၄၅မိနစ်အတွင်း saunaအတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာနော်…ဟီး။ပြန်ပြောရလောက်အောင်ပဲ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်သွားခဲ့ သလိုအကြိမ်တိုင်းဟာလည်း သတိရစရာစိတ်ကြည်နူးစရာအသစ်တွေကိုပေးတာပါပဲ။
ဆင်ခြေဖုံးမှာပဲရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်သူဆီပြန်ရောက်တော့ သူ့ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုပြောပြခဲ့ချိန်မှာ သူက ပြုံးဖြဲဖြဲရယ်ပြီး အဲဒါတွေမျိုးစတိုးဆိုင်မှာတောင်ဝယ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပဲ။
Posted by Alex Aung at 10:05 PM2comments: